Ingabe Amafomu Okuhola Afile? | Martech Zone
NgeSonto, Okthoba 23, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 UJenn Lisak Golding
Impendulo emfushane? Yebo.
Okungenani ngomqondo wendabuko, nangokuthi “ngokwendabuko” sisho ukufuna imininingwane yezivakashi ngaphambi kokuthi unikeze inani, noma ukusebenzisa okuqukethwe okudala, okumile njengesikhuthazo.
Masenze isipele lelo loli ngesizinda esithile:
Emsebenzini wethu wokusiza amaklayenti akhulise ukuguqulwa kwawo ku-inthanethi, siqaphele ukwehla okukhulu, okungaguquki kubavakashi bewebhu abagcwalisa amafomu wokuhola wendabuko. Kunesizathu esihle salokho.
Ukuziphatha komthengi kuyashintsha, ikakhulu ngoba ubuchwepheshe, ulwazi nokuxhumana okutholakalayo kubo kugcina kuguquka futhi kwakha kabusha ukuziphatha kwabo.
Ngenxa yalokho, abathengi bakho sebekhule baba nolwazi oluningi, banokuqonda, bafuna ngenkani, futhi baphazamiseka. Sekukonke, kunjalo engathandeki ngokuphelele ngokuqukethwe okumile okuvame ukweqa umaki ekubetheleleni izidingo zabo, izintshisekelo zabo, noma ukuthi bakuphi ohambweni lokuthenga.
Okuqukethwe okunamasango okusebenze kahle kungekudala (siyakubheka, amaphepha amhlophe nama-ebook) manje sekuyizisusa ezimbi zokuthola imininingwane yokuxhumana yomuntu.
Uma u cabanga ngewebhusayithi yakho njenge ukuthengiswa kwedijithali rep (njengoba kufanele), okuqukethwe okumile okufafazwe amafomu okuhola kufana nomthengisi othengisa izingxoxo, ozwakala njengerekhodi eliphukile, futhi ahambise iphimbo elifanayo lezithulu kunoma yiliphi ithemba eliwela indlela yakhe. Qhathanisa lokho nomphathi othengisayo obuza imibuzo, alalele, futhi alethe izimpendulo eziwusizo. Umuntu ongakhunjulwa njengomthengisi oshayayo, kepha njengomeluleki othembekile futhi onengxoxo enhle. Yilokho okuqukethwe okusebenzisana okungaletha.
Ingabe ukusebenzisana kuyasebenza ngempela?
Cabanga ngale miphumela:
Okuqukethwe okusebenzisana kukhiqiza ukuguqulwa okungu-94% ngaphezulu Umthombo
Okuqukethwe okusebenzisana kukhiqiza ukusebenzisana okuphezulu kwabathengi okungu-300% Umthombo
Okuqukethwe okusebenzisana kukhiqiza ukugcinwa okuphezulu kwemininingwane okungama-60%. Umthombo
Okuqukethwe okusebenzisana kukhiqiza idatha engaphezulu okungu-500% eqoqiwe. Umthombo
Izizathu ezimbili esifuna ukukugcizelela:
Ulwazi olwenziwe ngokwezifiso zami nokuthi ngikuphi lapho ngithenga khona luzohlala lunamagama athi “konke” okuqukethwe okwenzelwe ukujabulisa wonke umuntu, yonke indawo. (Sonke siyazi ukuthi ukuzama ukujabulisa wonke umuntu kusebenza kanjani. Akusebenzi.)
Ososayensi bezinzwa basitshela “ubuchopho obuphindaphindiwe”(Igama lesidlaliso lengxenye yobuchopho eqhuba isimilo esingazi lutho nezwi lokugcina ezinqumweni) kakhulu Okubukwayo, nokuqukethwe okungenazo izinto ezibukwayo akusebenzi kangako.
I-anecdote encane yokuxhasa leli phuzu lokugcina: Sake sahlolwa iklayenti nge-infographic ngephepha elimhlophe, ngalinye lihleli ngemuva kwefomu lokuhola. Iphepha elimhlophe lithole ukuguqulwa okungu-zero, ngenkathi i-infographic ivuna ukuthunyelwa okungu-100%. Ufuna ukuthi ubuchopho obuphindaphindiwe buthathe isinyathelo? Yenza okuqukethwe kwakho kuphoqeke ngokubukeka, ngenxa kaPete.
Icala lokulahla indlela yokuguqula engasasebenzi akulona ukubulala amafomu ngokuphelele, kepha uku nudge amakhasimende ekubhekaneni nokuhlangenwe nakho okuhlangene lokho kwakha ukwethembana futhi kudilize inani ngaphambi kokuthi ubacele ukuzibophezela okukhulu njengokuhlanganyela imininingwane yabo yokuxhumana. (Njengoba nje ubungaziphatha ngosuku uma unethemba lokuthola usuku lwesibili.)
Uhlobo luni lokuqukethwe okusebenzisanayo olungakwenza lokho?
Izibonelo ze okuqukethwe okusebenzisanayo zihlanganisa:
Isihleli Sokuqokwa - Mema amathuba okuhlola izici noma izinzuzo zokushayela ngokubeka i-aphoyintimenti
Ukwahlulela - Sondeza izidingo zakho, bese uletha izincomo eziwusizo
Izibalo - Siza abathengi ukukala inani
Xoxa - 1: 1, usizo lwesikhathi sangempela njengoba nje ikhasimende lihlola ukuthengwa
Indlela Engokwezifiso / Amaphromoshini - Amathuluzi wangokwezifiso, izincomo noma amaphromoshini asuselwa kokuthandwa ngumthengi, umlando, noma ukuthenga kontanga
Ukuhlola Okusheshayo - Susa izithiyo zokuthenga ngokucacisa ukuthi bangathenga manje
I-Instant Win - Hlanganisa izikhuthazi nelukuluku
I-infographics esebenzayo - I-infographics enezinto ezisebenzisanayo ezinjengezinto ezinyakazayo nezifunwayo njengama-panes wolwazi noma amavidiyo
Khokha nge-tweet / share social - Vuza izivakashi ngokufinyelela lapho babelana ngokuqukethwe kwakho nenethiwekhi yabo yezokuxhumana
kwakha - Vumela izivakashi zihlole futhi zibonise ulwazi lwazo
Indaba Microsites - Ama-microsites aku-inthanethi ahambela isivakashi emakhasini nakumavidiyo aguqukela ekuguqulweni
Trivia - Gcwalisa ilukuluku labo futhi ubonise i-show'em ukuthi bazi kangakanani
Ividiyo - Khombisa uma utshela
Lapho uhlela okuqukethwe kwakho okusebenzisana, kuyasiza ukukhumbula abashayeli bengqondo leso senzo sesivakashi sephethiloli nokusetshenziswa kokuqukethwe. Ngezansi sibhala okumbalwa, okubolekwe kubangani bethu ku Amafomu Okuhola Afile:
Ingabe kusadida ukuthi lokhu kuzobukeka kanjani kusebenza? Nayi ifayili le- umhlahlandlela ophathwayo, ongakwazi "ukuyikhokha nge-tweet" ukuze uthole ukunambitheka kwendlela yokuhola-gen yokusebenzisana.
Bheka umhlahlandlela wokusebenzisana
Ngaphambi kokuba sihlukane ngezindlela, ngifuna ukuvuma futhi nginikeze okuphezulu okunehlanu kumakhasimende ethu futhi abalingani bokuqukethwe abasebenzisanayo—UMuhammad Yasin noFelicia Savage ePerQ. Ithimba labo lisungule isoftware emnandi, yokusebenzisana yokuguqula iwebhusayithi yakho ibe ngumthengisi wedijithali, okufanele uyenze Hlola kanye nedemo, isimo.
Cela i-Demo ye-Interactive Content Software
Yiziphi izinhlobo zokuqukethwe okusebenzisanayo, uma kukhona, oke wabhekana nakho? Iyini imicabango yakho kuze kube manje? Yabelana ngezansi futhi sisizane ukuphuma.
Ukudalula: I-PERQ yikhasimende lethu agency.
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweokuqukethwe okusebenzisanayoisoftware yokusebenzisanaizinhlobo zokuqukethwe ezisebenzisanayookuhlangenwe nakho okusebenzisanayoamafomu okuholaamafomu okuhola afileI-PERQ